Tirada dhimashada coronavirus ee gudaha Soomaaliya oo gaartay 7 qof - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaTirada dhimashada coronavirus ee gudaha Soomaaliya oo gaartay 7 qof
April 19, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) 19 kiis oo cusub oo coronavirus ah ayaa laga helay gudaha Muqdisho 24-kii saac ee la soo dhaafay, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Dhammaan dadka laga helay cudurka coronavirus ayaa ah muwaadiniin Soomaaliyeed.
Labo qof ayaa xanuunka u geeriyootay 24-saac ee la soo dhaafay, sida Wasaaradda Caafimaadku ay ku sheegtay war-saxaafadeed.
Iyadoo maanta ay tahay Axad, tirada guud ee kiisaska COVID-19 ee laga helay gudaha Soomaaliya waa 135, todobo dhimasho ah, iyo labo qof oo ka bogsaday.
April 30, 2020 Kiisaska coronavirus gudaha Soomaaliya oo gaaray 601
Boosaaso-(Puntland Mirror) Qarax ayaa caawa fiidkii ka dhacay magaalada Boosaaso, sida ay sheegeen haayadaha ammaanka. Qaraxa ayaa ahaa kan wadada dhinaceeda lagu aaso oo lala beegsaday gaari ay leeyihiin ciidamada ammaanka Puntland, mana jirto [...]